फेरि घट्यो सुनको मूल्य ! – Namaste Host
फेरि घट्यो सुनको मूल्य !
March 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on फेरि घट्यो सुनको मूल्य !
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बिहीबार सुनको मूल्य केही बढेपनि शुक्रबार भने पुनः घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यसअघि बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार ८०० थियो । यस्तै शुक्रबार तेजावी सुन तोलामा ८५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलामा १२७० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै ‘कम्पनी’ मार्फत मात्रै कारोवार गर्ने ब्यवस्थाको तयारीमा लागेको हो।
अहिले घरजग्गा व्यवसायीले खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुवैबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्। उनीहरूले जग्गाको मूल्यअनुसार सरकारलाई समेत राजस्व तिर्दैनन्। अब सरकारी मान्यता प्राप्त निकायबाट जग्गाको कारोबार गर्दा हुने ठगी रोकिनेछ।
मन्त्रालयले अनलाइनबाटै जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बिक्री गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत विवरण वेभसाइटमा राखिन्छ। खरिदकर्ताले मन परेमा उक्त अनलाइनमार्फत नै खरिद गर्न सक्छ। यसरी खरिदबिक्री गर्दा देशभरको जग्गा कारोबारको तथ्यांक राख्न सजिलो हुनेछ।
पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायी संगठित भएर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन्। कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा कारोबारको संख्या कम देखिए पनि सरकारलाई राजस्व बढी प्राप्त हुन्छ।
‘कम्पनीले राज्यलाई राजस्व पनि तिर्ने भएकाले निकाय खडा हुँदा राम्रो हुन्छ’, उनले भने। अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरे किन्ने, बिक्री गर्ने र मध्यस्थ गर्ने सबैलाई सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। अन्नपुर्ण पोष्टमा तुलसी सुवेदीले समाचार लेखेका छन् ।
चर्चित युट्युवर विश्व लिम्बुले खोले आफ्नो डिर्भोस हुनुको कारण (भिडियो सहित)